Dunida Fudud - Geofumadas
Earth Virtual 3D. Microsoft Virtual Earth Khariidadaha Live
Google waxay soo saartay nooc beta cusub oo ah biraawsarka biraawsarkiisa, qalab aad u xiiso badan. Xaaladdan oo kale, si aad u hawlgeliso waa inaad fulisaa xiriiriyaha cusub! dhinaca midig ee calaamadda baaritaanka shaybaarka, oo dhaqaajiso xulashooyinka. Digniintu way cadahay, kaliya waa tijaabooyin la sameynayo, sidaa darteed ...
Google Earth / Maps, tabo cusub, dalwaddii Earth
Allallsoft waxay leedahay dhowr codsi oo gacan ka geysanaya soo dejinta sawirrada adeegyada khariiddada khadka tooska ah ee ugu caansan. Barnaamijyadani waa noocyo isdaba-joog ah oo ah waxa uu ahaa Sawirka Google Image Donwnloader, oo aan ka hadlay ku dhowaad laba sano ka hor oo daqiiqad u muuqatay inay shaqada joojisay. Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya barnaamijyadan ...
Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Dunida Virtual, cusbooneysiinta muuqaalka Abriil 2009
Dunida Virtual waxay cusbooneysiineysaa xawaare aad uga dheereeya Google Earth, bishii Maarso ayey kor u kacday 21 qaaxo, bishii Abriilna waxay soo xareeyeen xog kale oo aad u tiro badan, qaar badan oo ka mid ahna waxay ka yimaadeen deegaankeenna Isbaanishka. Heerkan ayey kula soo xiriiri kartaa dhowaan, maxaa yeelay taasi waa mid ka mid ah ...
Taasi waa inta ay le'eg tahay xaddiga xogta ee Virtual Earth ay soo dirtay maalmahan Maarso, iyo waddamada deegaanka Isbaanishka aan laga tagin; Mexico iyo Brazil ayaa ahaa ka faa'iideystayaasha ugu badan. Magacyadu waxay ku qoran yihiin Ingiriis, sida loogu dhawaaqay Virtual Earth. Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika ...
Markii ugu dambeysay waxaan heysanay magaalooyin badan oo ku hadla Isbaanishka oo la cusbooneysiiyay VirtualEarth, kiiskan bishii Oktoobar waxaa la shaaciyay cusbooneysiin kale oo ballaaran, taas oo si lama filaan ah ugu kordheysa xaddiga qosolka ah ee 41.07 Terabits Laakiin markan kaliya Spain ayaa qaadata abaalmarinta. Magaalooyinka ayaa kala ah: Barcelona Malaga Manresa Mijas Oviedo Sagunto ...
Haddii Microsoft doonayso inay si dhab ah uga ogaato dunida cilmiga dhulka iyo inay dhulka ka hesho Google, waa inay iskaashi la sameysaa shirkadaha softiweerka ee takhasuska leh oo ay ka dhigtaa "mid xirfad leh". Tani waa waxa ku dhacay kiiska bilaabista TrueSpace si loogu maadeysto Sketchup! Hada heshiiska lala galay ESRI wuxuu doonayaa inuu la xiriiro dadka isticmaala ...
ArcGIS-ESRI, dalwaddii Earth
Microsoft wuxuu ku dhawaaqay TrueSpace
Waxaan rajeynayaa raaligelin wanaagsan erayga dhaarta oo carqalad ku noqon kara dalalka qaar, laakiin shitting waa qashinka ay Microsoft ku sameyneyso qalab awood leh oo ay 5 bilood ka hor ka heshay Caligari. Iyo maxay u muuqataa in Microsoft shits ay ku socoto TrueSpace? Hagaag, maxaa yeelay waxay soo jeedinaysaa ujeedo fudud oo lagula tartami karo ...
Waa xanuun badan tahay inaad aragto mashaariic xiiso leh oo dharkooda jeexjeexan oo aqbalaan inay howlgab noqonayaan ... maalmo yar ka hor waxaan xusnay daciifnimada mashaariicda ee aan lala xiriirinin qorshe suuqgeyn xoog leh oo bixinaya waaritaan. Tani dhab ahaan maahan arrinta MapBuilder, mashruuc dhashay bishii Diseembar 2003, natiijooyin wanaagsanna leh ...
Cusbooneysiinta sawirada qaraarka sare leh ee Virtual Earth ee bisha Luulyo si wanaagsan ayey u socotaa, waqti dheer ayey qaadatay tan iyo markii aan aragnay lacag intaa le'eg oo la cusbooneysiiyey, oo ay ku jiraan waddamada ku hadla Isbaanishka. Waxay u muuqataa in weerarkiisa uu ku raadinayo xog uu u shaqeeyay inkasta oo intiisa badan lala qaato UltraCam, ...
Muddo ka hor waxaan ka hadalnay lix beddelaad oo kala duwan oo loogu talagalay adeegyada khariidadda internetka; Hagaag, waa inaad midkood kajartaa oo aad mid kale gelisaa halista baabi'inta. Khariidadaha Su'aal Weydii Weydii waxay go'aansatay inay iska dhiibto, hadda waxay ku muujineysaa Virtual Earth boggeeda, taas oo aan u maleyneynin in Microsoft ay sidoo kale go'aansatay inay iibsato shit ugu yar
The Battle Google iyo Microsoft waxay sii wadaan dagaalka ay ugu jiraan buufinnada dalxiiska, labaduba waxay fureen istiraatiijiyad la mid ah, iyagoo ka dhigaya xogtooda inay diyaar u yihiin bulshada khadka tooska ah ugu cusboonaysiiyaan bilaash. Sanadkii la soo dhaafay, Google waxay lahayd foom si dadka ama hay'adaha ay u buuxin karaan, iyagoo ogeysiinaya waxa ay haysteen ... sida muuqata ...
Isku xir Manifold ilaa adeegyada OGC
Awoodda ugu wanaagsan ee aan ku arkay Manifold GIS waxaa ka mid ah shaqeynta isku xirnaanta xogta, labadaba Google Earth, Virtual Earth, khariidadaha Yahoo iyo sidoo kale adeegyada WMS iyadoo la raacayo heerarka OGC. Aan aragno sida loo sameeyo. Xaaladdan oo kale, waxaan doonayaa inaan isku xiro aag Calle Valdemaría ah, sida ku cad ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth
Vexcel, oo hoosaad ka ah Microsoft, wuxuu bixiyaa xogta Virtual Earth ee qad la'aanta. Xalkani wuxuu xaqiijinayaa inuu bixiyo xogta muuqaalka 3D iyo sawirro ka tayo wanaagsan kuwa laga arko internetka oo wuxuu ku jiri karaa intranet-ka internetka, isagoo dooranaya magaalo, gobol, gobol iyo xitaa dhammaan caymiska adduunka. Google Geo wuxuu dhashay ...
Dunida Virtual-ka waxaa lagu arki karaa nooc la mid ah Google Earth, in kasta oo aanu ku jirin desktop-ka laakiin uu ku yaal websaydhka, isagoo ku dhaqaajinaya adoo rakibaya qalabka '3D' ... waa xoogaa jiidis ah maxaa yeelay waa inaad rukhsad u siisaa qalabka wax lagu shubo laakiin ugu dambeyn wuu shaqeeyaa. Hadda waxay soo kordhiyeen feyl kml ah oo kuu oggolaanaya inaad aragto moolka iyo loolka mesh midkastoo ...